संसारभरका मनिसमा अहिले खानामा धेरै चेतना बढेको छ । कोहीले अर्ग्यानिक खाना खोज्छन्, त कतिले ग्लुटिन फ्री, सुगर फ्री एलर्जेन्ट फ्री । त्यसैले होटल रेस्टुरेन्टमा खाना खुवाउन र पाहुनाको रोजाइ पूर्ति गर्न त्यति सजिलो छैन ।
पछिल्लो समयमा ‘भेगान डाइट’ निकै लोकप्रिय हुँदै गएको पूर्ण शाकाहारी खाना पस्कन थालिएको छ । विश्वभर अहिले भेगान डाइटका लागि छुट्टै रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालनमा छन् र होटलका पार्टीहरूमा पनि भेगान खाना खाने वर्गलाई छुट्टै बफ्फेट राखेर शुद्ध तरिकाबाट पस्कने चलन आएको छ ।
ग्राहकले आफ्नो खानेकुराको सूचीबाट त्यस्ता खानेकुरा हटाएका छन्, जो मिठो त छ तर स्वास्थ्यका लागि अनुकुल छैन र खानु पाप मान्छन् । जस्तो कि ग्राहकले माछा, मासु मात्र होइन, दूधजन्य खाद्यवस्तु पनि खान मान्दैनन् ।
यतिसम्म कि कुनै पनि पशुपन्छीको बध गर्नु हुँदैन । पशुपन्छीको जीवन पनि मानव जीवन जस्तै हो, उनीहरूको पनि आफ्नै संसार हुन्छ, परिवार हुन्छ अनि मानव जीबन जस्तै आत्मा र चेतना हुने हुँदा पशुपन्छीको जीवन सिध्याउनु भनेको प्रकृतिको नाश गर्नु बराबर मान्छन् । मासुजन्य परिकार खाँदै खाँदैनन् ।
त्यति मात्र होइन, कुनै पनि पशुपन्क्षीबाट प्राप्त हुने खानेकुरा सेवन वा प्रयोग गर्दैनन् । किनभने उनीहरू अरुको जीवन हत्याएर, अरुलाई रुवाएर आफ्नो पेट भर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । यस्ता जमातले मासु मात्र होइन, पशुपन्छीको कुनै पनि उत्पादन सेवन गर्दैनन् । कतिसम्म भने पशुपन्छीको रौं, भुत्ला, छालाबाट बनेको वस्तु समेत प्रयोग गर्दैनन् । यी विशुद्ध शाकाहारी हुन् ।
गाईको दूध भनेको उसको आफ्नो बच्चाको लागि हो, हाम्रा लागि होइन भन्ने मान्यता राख्छन् । हुन त धेरै मान्छे शाकाहारी (भेजेटेरियन) छन् तर शुद्ध शाकाहारी (भेगान) भने केही कम छन् र पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ ।
एक स्वस्थ मनिसका लागि सन्तुलित भोजन लिँदा पुरुषका लागि २५०० क्यालोरी र महिलाको लागि २००० क्यालोरी हुन जरुरी मानिन्छ । जुन आफ्नो दैनिक पेशासँग पनि भेद खान्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र कुन किसिमको छ, आफूलाई कति ऊर्जा आवश्यक पर्छ, त्यसमा भर परेको हुन्छ ।
जस्तो कि खेलाडी तथा श्रमिकका लागि केही ज्यादा क्यालोरी आवश्यक पर्छ भने कार्यालयभित्र मात्र टेबल वर्कका लागि केही कम क्यालोरी जरुरत पर्छ र भेगान डाइट सेवन गर्नेले पनि क्यालोरीलाई पूर्ण रुपमा ख्याल राखेर पूर्ण शाकाहरी खानाको सन्तुलन मिलाएको हुन्छ ।
शरीरलाई ऊर्जावान बनाइराख्न प्रोटिनको सबैभन्दा ज्यादा जरुरत हुन्छ । यसको लागि दिनको शुरूआत अंकुरित अनाजबाट शुरू गर्नु उत्तम मानिन्छ । अंकुरित अनाजमा प्रोटिनको साथसाथै कार्बाेहाइडेड, भिटामिन र खनिज प्राप्त हुन्छ, जुन पाचनका लागि अति राम्रो हुन्छ । साथमा सागसब्जीको झोल पनि अति स्वास्थ्यकर मानिन्छ । दिनमा ५ देखि ७ गिलास नियमित पानी पिउनाले पनि शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
के हो वास्तविक भेगान ?
भेगान फूड पछ्याउने मनिसले अण्डा, मासु, डेरी उत्पादन लगायत सबै प्रकारका पशुजन्य उत्पादनलाई भोजन, कपडा तथा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि पनि वञ्चित गरिएको छ । मानिसहरू विभिन्न कारणले भेगान डाइटलाई फलो गर्छन् । यसको मुख्य कारण पर्यावरण प्रतिको चिन्ता वा पशुपन्छीप्रतिको माया पनि एक विशेष कारण हुनसक्छ । तथापि, यसबाट विभिन्न स्वास्थ्यलाभ पनि हुन्छ ।
भोजनमा यदि हामीले प्राकृतिक स्रोत शुद्ध शाकाहारी सब्जीहरू सही तरिकाबाट उपयोग गरेको खण्डमा स्वस्थ रहन र दीर्घ जीवनका लागि मद्दत पुर्‍याएको हुन्छ । प्राकृतिक सागसब्जीमा पनि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन, खनिज, भिटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम आदि पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिन्छ । जे खाएपनि शरीरलाई स्वस्थ राख्नु हो । किन अरुको ज्यान मार्नुपर्‍यो र उसको बालबच्चाको भाग खोसेर खानुपर्‍यो भन्ने मान्यता भेगान फुड प्रयोगकर्ताको छ । यसरी प्रकृति वा पशुपन्छीसँग भावनात्मक रुपमै एकाकार भएर फरक किसिमको खानेकुरा तयार गर्नुलाई भेगान डाइट भनिन्छ ।
भेगानिजम शतप्रतिशत शाकाहारी हुनाले डेरी प्रडक्ट नखाने हुँदा भटमासबाट बनेको दूध, तोफु, न्युट्रेला, ग्रानुला जस्ता खाना रोजेका हुन्छन् र यो निकै स्वस्थवद्र्धक पनि मानिन्छ । पछिल्लो समयमा आएर भेगान र भेजिटेरियनका लागि ‘पिओर मेजिटेरियन मिट’ परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको युरोपियन खाद्य वैज्ञानिकले दाबी गरेका छन् । जुन पूर्णरुपमा ग्यारेन्टीका साथ शुद्ध शाकाहारी हुनेछ र बजारमा सहज रुपमा पाइनेछ ।
नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा भेगान रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठमेल तथा झम्सिखेलमा पनि भेगान रेस्टुरेन्ट छन् र अन्य होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ग्राहकको माग अनुसार खाना सर्भ गर्ने चलन छ । विश्वमा भेगानको संख्या बढ्दो क्रममा छ । भारत तथा युरोप मुलुकमा भेगानहरू धेरै पहिलादेखि नै थिए । भेजिटेरियन र भेगानमा धेरै फरक छ । भेजिटेरियन र भेगानलाई एउटै हिस्सामा राख्न मिल्दैन । भेजिटेरियन शाकाहारी मात्र हुन् तर भेगान शुद्ध शाकाहारी मानिन्छ । भेगानको प्रमुख खानाको स्रोत वनस्पतिजन्य प्राकृतिक मात्र हुन्छ ।
के–के पर्छन् भेगान डाइटमा ?
प्राकृतिक रुपमा उब्जेका फलफूल, सागसब्जी, अन्न, ड्राइफ्रूड्स लगायतका वनस्पतिबाट उत्पन्न हुने खाद्यान्न तथा विभिन्न बिउमार्फत उत्पादन हुने आहार होल फूड भेगान डाइट अन्तर्गत पर्दछ । काँचो फल, सागसब्जी, नट्स, बिउ वा बोटबिरुवा खाद्य पदार्थमा आधारित एक शाकाहारी आहार हो । गाईभैंसीको दूधको सट्टामा सोया मिल्क, अल्मोन्ड मिल्क, क्यासुनट मिल्क, राइस मिल्क, वट्स मिल्क, हेम्प मिल्क र अन्य जनावरको दुग्धजन्य पदार्थका लागि जस्तै चीज, पनिर, घ्यु, बटर जस्ता पदार्थका लागि पनि पर्याप्त विकल्प छन् ।
अण्डाको विकल्पमा चिया सिड एग, चनाको पिठोको एग, क्रण स्ट्राच एग, एप्पल सस, टोफु लगायत खान सकिन्छ । मासुको विकल्पको रुपमा पनि पर्याप्त मात्रमा बोटबिरुवाबाट उत्पादन हुने खाद्यान्न ग्रोसरीमा उपलब्ध हुन्छ ।
गुलियो खानेहरूका लागि पनि यस्तै पर्याप्त मात्रमा भेराइटीहरू भेगान डाइट स्टोरमा पाइन्छ । प्लान्ट बेसका विभिन्न मासुका विकल्प पनि बजारमा उपलब्ध हुन्छ । जस्तो मासुमा पाइने प्रोटिन विभिन्न होल ग्रेनहरूमा पर्याप्त पाइन्छ र सोया मिल्कबाट बन्ने टोफु पनि भेगान डाइट सेवन गर्नेहरूका लागि अतिउत्तम मानिन्छ । घ्यूफल अर्थात आभोगाडो पनि भेगानका लागि राम्रो फल मानिन्छ । खुर्सानीको च्याख्ला, हट सस, राइस भिनेगर, चिल्ली पाउडर, हेर्ब्स पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिन्जर पाउडर, जिरा पाउडर पनि भेगान डाइट खानेका लागि अतिउत्तम सिजिनिङ मानिन्छ ।
भेगान फूड खानाले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदा
– शरीरको अनावश्यक वजन घटाउन भेगान डाइटले पर्याप्त मद्दत पुर्‍याएको हुन्छ ।
– स्वस्थ मुटुका लागि पनि भेगान डाइट उपयुक्त मानिन्छ ।
– डाइबिटिज र क्यान्सर जस्ता रोग हुनबाट भेगान डाइटले जोगाउँछ ।
– किड्नीमा हुने विभिन्न संक्रमणबाट बचाउनुका साथै उच्च रक्तचापलाई सन्तुलन गराउँछ ।
– भेगान डाइट प्रयोग गर्नेहरू सालीन, कम रिसाउने र कम आक्रमक हुन्छन् ।
– भेगान डाइट खानेहरूलाई एक पावर हाउसको रुपमा लिइन्छ, जसको आन्तरिक शक्ति पर्याप्त हुने गर्छ ।
– फिजिकल फिटनेस लेबल बढाउन पनि भेगान डाइट प्रयोग गरिन्छ ।
– कोलेस्ट्रोल लेबल कम गराउन भेगान डाइटले मद्दत गरेको हुन्छ ।
– स्वस्थ र मुलायम स्कीनका लागि भेगान डाइट राम्रो मानिन्छ ।
– भेगान डाइट प्रयोग गर्नेलाई चोट पटक लागेका बेला दुखाइ कम हुन्छ ।
– मजबुत हड्डीका लागि पनि भेगानिजम हुन जरुरी मानिन्छ ।
– अन्य खाद्यान्नले भन्दा ज्यादा शक्ति भेगान डाइटले दिन्छ ।
– पर्याप्त मात्रामा भाग जगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । फिबर र माइग्रेण हुनबाट बचाउँछ ।
– भेगान डाइटले स्वस्थ र दीर्घ जीवनका लागि मद्दत पुर्‍याउँछ ।
(लेखक सोल्टी क्राउन प्लाजा होटेलका सेफ हुन् ।)